Travel | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : manawphyu - Tuesday, April 20. 2010
Categories : Travel , Comments :2Comments
Defined Tags : Travel
Categories : Travel , Comments : 1 Comment
Author : May15 - Monday, December 21. 2009
သွားခဲ့တာကတော့ မေလကတည်းကပါ။ အခုမှ အားလို့ ရေးပြီးတင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။
Categories : Travel , Comments :
အင်းလေးဖောင်တော်ဦး နဲ့ မင်းကွန်းတောင်ခြေ
Author : kyawkyaw2 - Friday, October 2. 2009
"ငွေသင်ဖြူးလေးခင်းထားသလို၊ သတင်းစကားဆိုလောက်တယ် x x ရေပေါ်မှာ အိမ်ကလေးတွေဆောက်မယ် xx တောင်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ် xx ရှမ်းမလေးတွေလည်း ချောပါတယ်" ဆိုသည့်သီချင်းစာသားအတိုင်း အင်းလေးကန်၏ အလှအပနှင့် ရိုးရာဓလေ့များမှာ
ဇေယျဝတီမြို့ နှင့် သœm၀တီမြို့
Author : kyawkyaw2 - Monday, September 7. 2009
ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မေမြို့နားက အလားတူ ဟိန္ဒူရွာတစ်ရွာရှိခဲ့ပါသည်။ မေမြို့အတက် အဆင်း သစ်သီး မျိုးစုံ ပန်းမျိုးစုံကို ဈေးတန်းလေးအသွင် ရောင်းချလေ့ရှိတဲ့ အောင်ချမ်းသာရွာရဲ့အလွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရွာလုံး နွားမွေး ပါတယ်။ သူတို့အိမ်က တဲစုတ်ဖြစ်ပါစေ ကြမ်းပြင်တွေ သူတို့သုံးတဲ့ ကြေးခွက် ကြေးအိုး အသုံးအဆောင်တွေဟာ
Author : kyawkyaw2 - Saturday, August 29. 2009
ဟူးကောင်းလွင်ပြင် အကြောင်း၊ အဲဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ ဓလေ့စရိုက်၊ ပြီးတော့ ချစ်မှုရေးရားလေးတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသား ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Author : ♥တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့♥ - Sunday, May 10. 2009
နွေရာသီမရောက်သေးပေမယ့်လည်း နွေဦးရဲ့နေရောင်ခြည်နွေးနွေးလေး ဖြာကျလာတာနဲ့ ဒီဆောင်းကို စိတ်ပျက်နေကြတဲ့ ကျမတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့က Cultus Lake ဆိုတဲ့ရေကန်တစ်ခုမှာ နေ့လည်စာသွားစားကြတယ်။
Categories : Travel , Comments :6Comments
Defined Tags : Canada, Travel, Vancouver, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဓာတ်ပုံ
Author : ♥တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့♥ - Tuesday, December 2. 2008
ကန်တော်ကြီး၊ အင်းလျား နဲ့ ရန်ကုန် အလှဓာတ်ပုံတွေကို ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက လုပ်ထားတဲ့ movie clip
နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်ရောက်နေလို့ ကျမလို ဝေးနေသူများတွက် ရည်စူးပါတယ်ရှင်။
Defined Tags : Travel, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ရန်ကုန်, အင်လျား
Author : ♥တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့♥ - Saturday, August 18. 2007
Defined Tags : Travel, ၀တ္ထု
ပူစပ်စပ်နေရောင်အောက်မှာ ထနောင်းနံ့က သင်းပျံ့နေသည်။ ခပ်ဝေးဝေးက ခပ်ဖြည်းဖြည်း ရွေ့နေတဲ့ ခင်တန်း၊ တာရိုးလေးတွေကို ငေးရင်း မြင်းလှည်းလေးပေါ်မှာ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ သူမကို သူပြုံးကြည့်နေခဲ့သည်။
Author : Thuta Aung - Wednesday, May 30. 2007
Categories : Travel , Comments :7Comments